1xbet miditra amin'ny kabinetra manokana, xbet miditra amin'ny kabinetra manokana
Samihafa ny tontolon'ny filokana ary mitombo isan-taona ny isan'ireo orinasa miloka, fa tsy misy mpilalao tsy hahalala ny birao 1xbet. Ity orinasa ity dia nanambara ny tenany ho be indrindra:
azo antoka – ny orinasa dia voatery mandoa vola amin'ny mpilalao hatramin'ny vola napetraky ny orinasa mihoatra ny 1 tapitrisa roubles
marin-toerana – eto dia ho hitan'ny mpilalao foana ny filokana malaza indrindra
samihafa – tsy ny filokana ihany no atolotry ny orinasa, fa koa miloka amin'ny sweepstakes, miloka amin'ny seho resaka, trano filokana an-tserasera sy maro hafa.
Mba hahafahan'ny mpilalao manomboka miloka, mila mamorona kaonty manokana ianao, hanao an'io, tsy maintsy mandalo ny fomba fisoratana anarana ianao amin'ny iray amin'ireo fomba naroso:
Amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka
Amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy (Vkontakte, Google Mail, Odnoklassniki)
Asa lehibe an'ny kabinetra manokana
Kabinetra manokana ao amin'ny birao araka izay notsorina araka izay azo atao, manolotra ireto fizarana manaraka ireto izy io:
Data manokana – ity ny fampahalalana rehetra momba ny kaontin'ny mpilalao, ny mombamomba azy sy ny adiresy mailaka nanoratana ny kaonty. ihany koa, amin'ity fizarana ity dia afaka manova ny mombamomba azy ny mpilalao, ny toerana misy azy sy ny teny miafina.
etona – Ao amin'ity fizarana ity, omena fotoana ny mpilalao hanakalo teboka nangonina tamin'ny loka sarobidy avy amin'ny orinasan'ny mpivarotra boky. Hampiasa an'ity endri-javatra ity, mila mameno takelaka iray ianao ary mampifandray ny vola Game Coin.
Fandaharana mpiara-miasa – amin'ity fizarana ity dia afaka mamarana fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny orinasa ianao. Mba hanaovana izany, mila manana tranokala na pejy amin'ny tambajotra sosialy mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena ianao.
Ny zava-bitanao – eto dia azonao atao ny mahita ny statistika momba ny filokana resy sy ny lalao ary ny filokana rehetra nandraisan'ny mpilalao anjara.
Fenoy indray ny kaontinao – Raha tsindrio ity bokotra ity, hisokatra ny menio ahafahanao misafidy ny fomba hametrahana, misy ireto safidy manaraka ireto: karatra banky, Yandex.Money, WebMoney, mpandraharaha finday, vola crypto.
Mialà vola – eto dia mazava ny zava-drehetra, miaraka amin'ny fanampian'ity fizarana ity, mpilalao dia afaka manaisotra ny vola azony.
Amin'ny alàlan'ny kaonty manokana dia azo atao ihany koa ny mamindra vola amin'ny namana, hampiasa io asa io dia ilaina ny manome alalana ny nomeraon-telefaona findainao eo amin'ilay tranonkala. Ilaina izany satria ny famindrana dia voamarina amin'ny alàlan'ny kaody sms. Tsara ny manamarika fa tsy ny mpanao boky rehetra no manana io asa io.
Ankoatry ny, ao amin'ny kabinetra manokana dia ho hitanao koa ny fizarana toy ny “Fikirana” ao anatiny dia azonao atao ny manatanteraka ireo fanao mahazatra izay hanamora ny filokana, ny mpilalao dia afaka misoratra amin'ny taratasim-baovao sy fampiroboroboana.
Ny mampiavaka ny orinasa filokana 1xbet dia ankoatry ny fiasa mahazatra, Afaka miditra amin'ireo fiasa ireo mpilalao “-dalana,” SY “velona”, izay midika fa ny mpampiasa dia afaka manampy ny lalao ankafiziny ao amin'ny Favorites mba hidirany foana.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny 1xbet amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy
Ho an'ny mpampiasa maro, milalao amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy no hany lalan-kivoahana, satria ny fampidinana sy fametrahana rindrambaiko ary programa fanampiny ho an'ny mpilalao dia misy olana. Ary noho izany, mankany amin'ny kaonty manokana amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy, mila miditra fotsiny ianao ary misoratra anarana, iray amin'ireny fomba ireny:
Ao anaty tsindry iray – amin'ny fisoratana anarana amin'ity fomba ity dia afaka miditra ao amin'ny kabinetranao manokana ianao, fa tsy afaka miloka sy miloka casino amin'ny Internet ianao, ary koa ny filokana amin'ny sweepstakes, satria fomba fisoratana anarana tsy feno io.
Amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaona finday – Eto ianao dia mila mampifandray ny nomeraon-telefaoninao ary manamafy ny fisoratana anarana amin'ny hafatra SMS izay tonga amin'ny isa voafaritra.
Tambajotra sosialy – mila misafidy ny lampihazo ianao: VKontakte, Odnoklassniki sy Google Mail ary mampifandray kaonty amin'ny alàlan'ny fampidirana ny teny miafinao ary miditra avy amin'ny tamba-jotra sosialy. Ny tombony amin'ity fomba ity dia tsy mila miditra data ianao raha te hiditra, mila tsindrio fotsiny ilay kisary amin'ny tamba-jotra nisoratra anarana ianao.
Amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka – midira fotsiny @ mailaka ary manamafy fisoratana anarana amin'ny fipihana ny rohy izay ho tonga ao anaty taratasy.
Midira ao amin'ny kabinetra manokana 1xbet amin'ny alàlan'ny fampiharana
Ny fampiharana dia plus lehibe ho an'ny mpilalao, mirakitra ireo fizarana mitovy amin'ny tranokala ofisialy avokoa, ny fampiharana ihany no pejy mora kokoa hita ao amin'ny Internet. Ny fampiharana dia manana ireto tombony manaraka ireto:
Ireo mpilalao dia hanana fidirana amin'ny fampiharana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao izay misy Internet
Fisoratana anarana haingana, izay azo atao koa amin'ny fampiharana
Ny fahaizana mametraka sy misintona vola amin'ny kaonty filalaovana
Ny app dia miasa haingana kokoa noho ny pejin-tranonkala ofisialy
Fanaraha-maso feno ny kaonty
Rafitra filokana tena ahazoana aina
Mitahiry tantaran'ny filokana
Azo alaina ho an'ny telefaona sy ny takelaka ilay kinova fampiharana
Ho fanampin'ny filokana ara-panatanjahantena mahazatra, mpilalao koa dia afaka mahita kiheba hafa amin'ny rindranasa, izany hoe:
Miloka amin'ny totalizator
Fananan-kery maromaro Tsy feno ny fizarana statistika
Miloka amin'ny statistika Fampitana an-tserasera maro no azo alefa amin'ny fotoana iray
Miresaka mivantana miaraka amin'ny mpitantana fanohanana teknika
Fahafahana mandray anjara amin'ny alàlan'ny fampiharana amin'ny bonus sy fampiroboroboana
Ny programa dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra, samy misy amin'ny android sy telefaona, ny fampiharana dia tsy mila fanavaozana rindrambaiko farany, toerana malalaka fotsiny eo amin'ny fitaovanao.
Ny famoronana kaonty manokana amin'ny telefaona finday dia hanamora ny asa, satria eto dia mora kokoa ny zava-drehetra, miainga amin'ny firafitry ny kiheba ka hatramin'ny filokana.